(Emelitere ikpeazụ On: 20/03/2020)
Most beer-loving travelers have Munich high on their to-do list. Ọ na-a nyere na Oktoberfest ga-anọ n'ebe kwa, ma Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival eweta ihe amara. No, bụghị ìgwè mmadụ. ị ahụmahụ ọkara ka ọtụtụ. Ma biya bụ okpukpu abụọ nke ike! Na-ada ka n'ụzọ zuru okè na mgbachapụ March na Spring, anyị!
Munich, Bavaria isi obodo, bụ n'ụlọ ka ọtụtụ narị afọ ụlọ na ọtụtụ ngosi ihe mgbe ochie. The obodo mara maka ya kwa afọ Oktoberfest ememe na ya biya Ụlọ Nzukọ Alaeze, gụnyere famed Hofbrauhaus, hiwere na 1589. Na Altstadt (Old Town), Central Marienplatz square nwere akara dị ka Neo-Gothic Neues Rathaus (nnukwu ọnụ ụlọ obodo), na a na-ewu ewu glockenspiel show na chimes na reenacts akụkọ si narị afọ nke 16.
Gị bụ ihe a mbụ na-eleta Munich? Ị ga-enwe obi ụtọ mara na ọ bụ a nnọọ esenowo-enyi na enyi obodo, fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ. Ọ nwere a ukwuu ọtọ akụrụngwa, ọ na-enye a ọtụtụ ma indoor and outdoor attractions, na idụhe bụ milder karịa ugwu akụkụ Germany na na ọ bụ ibu mfe na-gburugburu and get to Nockherberg Starkbierfest – The ike biya ememme na Munich.
Don’t speak German or Bavarian? Nsogbu adịghị! Most of the younger generation speaks English, ma inwe ike ahu nagide a bit nke German (ma ọ bụ ọbụna Bavarian, ma ọ bụrụ na ị na-anwa anwa) na ukwuu ekele obodo. The obodo nwere aha nke ịbụ keonyeiro, ma ọ bụ n'ebe dị anya n'ebe eziokwu. Munich natives bụ enyi na enyi na-enye aka mgbe ị na-amalite na-mara ha. Otu n'ime ihe ndị o kwere omume, ndị nke “omenala ujo” pụrụ ịbụ otú ọbụna na kpa ogbe ndịda ebe, ya nwere ike ka na-esi nnọọ jụụ na a weekday oyi n'abalị ma ọ bụ a Sunday; Munich ike na-enye ọtụtụ uru nke obodo ndụ (nnukwu ụlọ oriri, mara mma ụlọ, ọtụtụ ihe na-eme) mwepu a otutu Oké mgbagharị, ỤZỤ, na nrụgide. Nke a obodo atụmatụ ndị kasị mma nke ọtụtụ ụwa: mepere emepe gburugburu ebe obibi, mara mma eke gburugburu, iche iche na mba na omenala blended na ọtụtụ omenala Bavarian ụzọ ndụ. Na na ọ na-ekwuru na biya bụ ụwa na-ama maka a mere!
The ike biya ememme bụ nke Munich ka biya ubi na Oktoberfest. N'ezie, a biya ememme pụrụ ịbụ na obodo kasị mma-na-ezo ezo. Ọ bụ n'ezie ọbụna tọrọ Oktoberfest, malitere ke ufọt ufọt 1600 si, site Munich si Paulaner mọnk na Paulaner Nockherberg bụ onye mbụ ebe mgbakọ Munich siri ike biya ememme!
The most commonly told origin story of starkbier is a simple tale of hungry monks. Amanye ngwa ngwa n'oge Rịọtaara, mọnk malitere ime biya starkbier ka a loophole ụzọ iji nweta ha rijuru afọ nke calories. ọzọ, ekele na elu etisasịwo siri ike ọdịnaya (mara dị ka wort), starkbier ghọrọ ghọtara dị mmiri mmiri na nri.
Iji nchikota ihe elu: starkbier bụ a siri ike biya, ọ bụ ike na mmanya ọdịnaya kamakwa etisasịwo solids, ọ ga-jupụta gị elu na ọgbaghara gị elu. Ị na e dọrọ aka ná ntị!
Mgbe isi ụlọ ahịa ígwè na shopping outlets ndị yiri ka na-anabata gị kaadị, ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-echekwa na Munich ga naanị anabata ego ma ọ bụ EC-kaadị (ka ndị na debit kaadị). Jide n'aka na ị na-ezuru euro na ị maka adị kwa ụbọchị ojiji.
Chọrọ ka akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi na Munich? Mgbe ahụ isi na n'elu SaveATrain ebe ị ga-esi gị tiketi nkeji na No peaky, ọzọ na-ezo ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/nockherberg-starkbierfest-munich-beer-festival/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Beerfestival #NockherbergStarkbierfest #ike biya tapping #TraveltoMunich BeerTravel drinkfestival Munich
Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel Turkey, Train Travel UK, Travel Europe
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Portugal, Ingbọ ologo Spain, Zọ njem Sweden, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe